Qoomiyada Romerka oo cunsiriyed lagu hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qoomiyada Romerka oo cunsiriyed lagu hayo
La daabacay tisdag 26 mars 2013 kl 14.10
Xaafadd kamid ah xaafadaha ay ku noolyahiin Romerka waddamada laysku yiraahdo Balkan. Foto: Maria Riddersted/SR
Qoomiyada Romerka ee ku nool waddamada EU waxaa loo geystaa midabtakoor, halka dowladdaha kamidka ah urur weynaha aysan arintaas si firfircoon wax uga qabanin.
Xaalada Qoomiyada Romerkana waxaa uga sii daraya xaalada dhaqaaleha adag ee ku habsatey inta badan Yurub, taas oo keentey in dowladdaha ay ahmiyada siiyaan waxyaabo kale, sida ay aaminsan tahay Miranda Voulasranta oo ka tirsan wasaarada arimaha dibada ee Finland.
Thomas Hammerberg oo ah la taliye QM, asagu waxa uuaaminsan yahay in Yurub ay iminka ku jirto xaalad xun oo siyaasadeed marka laga hadlayo arimaha midabtakoorka.
- Arinta loo baahan yahay waxa weeye in cadaadis lagu saaro dowladda xubinta ka ah ururka EU meelmarinta siyaasad dib u habeyn oo wax looga waqto midabtakoorka maanta Yurub ka jira, ayuu yeri Thomas Hammarberg. Asaga oo intaasna raaciyey in Yurub ka baaran degtey arintaas oo aasaasn u sameysey farsamooyin midabtakoorka looga hortago balse nasiib´dare la baalmarey.
- Waxey EU leedahey xubin xaquuqul insaan oo la yiraahdo "Fundamental Rights Agency" oo sal dhigeedu yahay Wien taas oo soo aruurisa macluumadka la xiriira midabtakoorka, waxeyna macluumaadkooda muujinayaa in qoomiyada Romerka yurub gudaheeda kalo kulmaan midabtakoor, ayuu yeri Hammarberg.
Miranda Voulasranta oo ka tirsan wasaarda arimaha dibada ee Finland, waxey ayada ka cabsi qabtaa in xaaladda aadka u xun ee ku suganyahiin maanta qoomiyada Romerka ay ka sii darto.
- Xaaladda dhaqaale ee liita oo ay maanta ku sugan yahiin inta badan waddamada EU, soo badanayaan kooxaha xagjirka midigta iyo naceybka dadkuna u dagaalamayaan nolashooda, xaaladdaas waxey keeneysaa in qoomiyadaha laga badanyahay sida Romerka iyo Jahuuda ay silcaan. Taas waa in aan la soconaa, ayey tiri Miranda Voulasranta.
Waddamada waqooyiga Yurub wax ka qabad arintaan hormood ayey u noqon karaan hadii ay firfircooni ka muujiyaan xarunta EU ee Bryssle ayey aaminsan yahiin labadaan ruux ee la wareystay marey ay ka qayb galayeen kulan looga hadlayey xaaladda qoomeyada Romerka, taas oo lagu qabtey Stockholm asbuucii hore.
Thomas Hammarberg asaga waxa uu doonayaan gaar ahaan in Iswedhen kaalin wax ku ool ah ka qaadato sidii wax looga qaban lahaan naceybka faraha badan ee ay qoomiyadaan la kulanta, iyo propaganda naceybka ku dhisan ee ay afuufayaan xagjiriinta ee ka dhanka ah Romerka.
- Xisbiyada, hogaamiyaasha iyo siyaasiinta kale ee la doortey, waa in ay ka soo horjeestaan kooxahaan afuufaya naceybka iyo aragtiyada aan sal iyo baarka laheyn ee maanta ka jira waddamo badan, kuwaas oo waxa ay afuufayaan u adeegsanaya sidii ay olalehooda doorasho cod ugu heli lehaayeen, ayuu yeri Thomas Hmmarberg oo ka qayb galayey seminaar loo bixiyey uur ku taalada Yurub oo looga hadlayey xaalada xun ee qoomiyada Romerka, seminaarkaas oo ay qabanqaabiyaashiisa kamid ahaayeen barlamaanka Yurub iyo komishinka Yurub iyo weliba ururka la yiraahdo "Svenska Paneuropaföreningen.
Qoomiyada Romerka ee ku nool waddamo badan oo ka tirsan EU ayaa ku nool xaalad aad iyo aad saboolnimo u ah, habo ugu darnaato wadamada laysku yiraahdo Balkan. Dhanka kale waxaa jira dhaqaalo ay EU ugu talo gashay waxka qabadka xaalada nolaleed ee Romarka oo habo yaraateen aan gaarin dadkii loogu talo galey. 50 Milyan oo Euro oo ay EU ugu talo gashay waxa ka badelka nolasha Romerka ku nool dalka Serbiya ayaan inta badan gaarin dadkii loogu talo galey lacagtaas iyo waxyaabahii la rabey in loogu qabto.
Bisha Maj ayaa waddam EU ka yeelan doonaan kulan weyne looga hadlayo xaaladda Romerka, kulankaas oo dowladdaha ku soo ban-dhigi doonaan waxyaabahii ay ka qabteen xaaladda Romerka, sida ay sheegtey Cecilia Malmström oo ka tirsan Kommishinka EU. Waxeyna rajeyneysaa in kulankaas oo ahaan doona mid joogto ah oo sannad kasta looga xaajodo xaalada Romerka, dadka matalyana Romerkana ay qayb qadan doonaan kulamada EU ee looga hadlayo xaaladooda.